News Mansarovar » प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन, मैले भनेपछि अर्को विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन, मैले भनेपछि अर्को विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री ओली – News Mansarovar
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन, मैले भनेपछि अर्को विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नहुने र चुनाव भन्दा अर्को विकल्पसमेत नभएको दाबी गरेका छन्। युवा संघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आफूले बैसाख १७ र २७ गते चुनाव गराउने तर प्रतिनिधिसभा भने पुनर्स्थापना नहुने बताएका हुन्। यद्यपि पुनर्स्थापनाको अन्तिम टुंगो भने सर्वोच्च अदालतले लगाउन बाँकी छ।
‘अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन। म बहुमतको नेतृत्वले भनेपछि अर्को विकल्प नै छैन,’ उनले भने, ‘अब कसरी हुन्छ? बहुमत मसँग छ। ६४ प्रतिशत मसँग भएको अवस्थामा चलाउन सक्दिनँ, प्रभावकारी हुँदैन र नयाँ ताजा जनादेश चाहियो भनेको हुँ।’
उनले प्रतिनिधिसभा पुरानो र सुकेको रुख भएकाले त्यसलाई काटिएको समेत बताएका छन्। सुकेको रुखले फल नदिने भएकाले त्यसलाई आफूले साफ गरेको उनको दाबी छ।
‘सुकेको रुखले फल दिन्छ भनेर २ वर्ष पालिराख्न हुँदैन भनेर ताजा जनादेश भनेको हुँ। कुहिएको रुखलाई ताजा भनेर रुखमै टास्न खोजेर हुँदैन। वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुन्छ। यही मितिमै निर्वाचन हुन्छ। यसमा कोही पनि साथीहरु भ्रम र अन्योलमा पर्न जरुरी छैन,’ उनले चुनाव गराइछाड्ने ठोकुवा गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रि ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेका ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीहरूको आलोचनामा ओलीले शनिबार लामो समय खर्चेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको बाँकी मन्तव्य जस्ताको तस्तै
‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने वाक्यांश मैले कुन सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ, उहाँहरूले कुन सन्दर्भमा प्रयोग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवधानिक भएको भनी हल्ला चलाइएको छ। एकपटक अदालतमा जागिर खाएकै भरमा यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भनेर प्रचार गर्नुभएको छ। एकपटक जागीर खाएकै भरमा यस्तो तर्क गर्न मिल्छ र?
निर्वाचन आयोगलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो कोही आएनन् किन आइएन सोधीखोजी गर्न पर्ला भनेको एकैपटक माइतीघर मण्डलामा ‘हामी यहाँ छौ’ भन्नु भयो। सूर्य चिन्ह र पार्टी हामी आधिकारिक हौ भनेर पत्र पठाउनु भएछ। कुन हैसियतमा पठाउनु भयो? केपी ओलीलाई कारवाही गर्‍यौँ भन्नु भयो। मच्छडले कहिलेकाहीँ हात्ती र भैसी पनि खान्छ। कति खान्छ? केपी ओलीलाई निकाल्छु भनेको त्यस्तै हो। मच्छडले छाला पनि छेड्दैन कसरी खान्छ? केपी ओलीलाई निस्कासन गर्छु भन्नु भएको छ कहाँबाट माइतीघर मण्डलाबाट?
तराईंमा डुबाउ हुने समस्या थियो। त्यसलाई रोकेर हामीले सिचाई सुविधा पुर्या‍एका छौँ। चाँदनी-दोधारामा अब सिंचाई पुग्ने भएको छ। रोजगारी सिर्जना कार्य अब सुरु हुनेछ। कृषिको विकास अब तराईमा धेरै हुने छ। चुरे संरक्षण अभियान अघि बढेको छ। यति विकास गर्दा पनि मधेशका माग सुनिएन भनिएको छ। मधेश मधेश भनेर मात्र हुन्छ? ३९६ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर शुरु गरेका ३०९ वटा शिलान्यास भएका छन्। तराईको विकासका लागि अहिलेको सरकार दत्तचित्त छ।नेपाल लाइभ